Dowladda Kenya oo shaaca ka qaaday arrinta kaliya ee hor-taagan in nabad ay ka dhalato dalka Soomaaliya – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Dowladda Kenya oo shaaca ka qaaday arrinta kaliya ee hor-taagan in nabad ay ka dhalato dalka Soomaaliya
Dowladda Kenya ayaa shuruud ku xirtay in hadii la doonayo in nabad ay ka dhalato dalka Soomaaliya ay muhiim tahay in beesha caalamka ay sii wado maal-gelinta howl-galka AMISOM ee Soomaaliya, xilli Midowga Yurub uu jartay dhaqaalo uu howl-galkaasi ku bixin jiray.
Wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Kenya Aamina Maxamed oo khudbad ka jeedisay kulanka golaha ammaanka Qaramada Midoobay ee ka dhacay magaalada New York ee dalka Maraykanka ayaa sheegtay in loo baahan yahay in la taageero ciidanka AMISOM, iyadoona dhinaca kale walaac ka muujisay mushaar dhimista lagu sameeyay ciidankaasi.
Waxay wasiiradda dhinaca kale sheegtay in hadii la doonayo in nabad laga dhaliyo Soomaaliya iyo gobolkaba ay muhiim tahay in la sii joogteeyo taageeridda dhaqaale ee AMISOM Soomaaliya, waxayna dhinaca kale ka digtay in mushaar dhimistii uu sameeyay Midowga Yurub ay keentay caqabado aad u badan.
Ugu dambeyntii, waxay wasiiradda arrimaha dibadda ee dalka Kenya Aamina Maxamed baaq u dirtay golaha ammaanka ee Qaramada Midoobay, iyadoona ugu baaqday inay fiiro gaar ah u yeeshaan arrintan islamarkaana aysan ka dhigin mid sahal ah.
“Marka hore waxaa muhiim ah inaan sii wadno maal-gelinta AMISOM iyo tilaabooyinka kale nabadeed ee ka soconaaya guud ahaan dalalka Afrika, maxaa yeelay qarash kasta oo la dhimo wuxuu caqabad ku yahay nabad ka suurto-gasha qaaradda oo dhan gaar ahaan dalka Soomaaliya” Sidaas waxaa tiri wasiir Aamina Maxamed.
Si kastaba ha ahaatee, dhawaan ayay ahayd markii Midowga Yurub uu 20% mushaaraadkii ka jaray ciidanka AMISOM, iyadoona sababta arrintaasi lagu sheegay ay tahay in taageeradda dhaqaalahaasi loo weeciyay meelo kale oo ka mid ah Soomaaliya.